Shona-language news about Zimbabwe, The Voice of America is one of the world's most trusted sources for news and information from the United States and around the world. VOA is a multi media news organization using radio, television, and the internet to d
Zimbabweans living outside the country who cannot receive our broadcast signals can now listen to and participate in LiveTalk in real time. Click on the link below to listen to the LiveTalk program in progress (8:30-9:00 p.m. Zimbabwe time (1830-1900 UTC)
Studio 7 for Zimbabwe provides comprehensive and reliable radio news seven days a week on AM, shortwave, satellite and Internet.
Vari kunze kwenyika vasingakwanise kutibata pamasaisai vanokwanisa kupinda muchirongwa cheLiveTalk pachinenge chichitepfenyurwa. Dzvanyai pa Link iri pasi kuti munzwe LiveTalk pakati pa8:30-9:30pm nguva dzekuZimbabwe kubva neMuvhuro kusvika Chishanu.
VOA Shona inokupai mavhidhiyo achangobuda muZimbabwe, Africa pamwe nedzimwe nyika. Mavhidhiyo eVOA Shona anosanganisira zviri munhau, hurukuro, zvematongerwo enyika, tsika nemitambo. Udzanai nekupana – VOA Shona.
VOA60 Africa inokupai nhau muchidimbu mumineti imwe chete yezvaitika muAfrica muzuva rose. Nhau idzi dzinosanganisira zvematongerwo enyika, mamiriro ekunze, mitambo pamwe nenyaya dziri kutsviriridza. Udzanai nekupana – VOA60.
VOA60 World inokupai nhau muchidimbu mumineti imwe chete yezvaitika pasi rose muzuva rose. Nhau idzi dzinosanganisira zvematongerwo enyika, mamiriro ekunze, mitambo pamwe nenyaya dziri kutsviriridza. Udzanai nekupana – VOA60 World.
VOA60 America inokupai nhau muchidimbu mumineti imwe chete yezvaitika muAmerica yose muzuva rose. Nhau idzi dzinosanganisira zvematongerwo enyika, mamiriro ekunze, mitambo pamwe nenyaya dziri kutsviriridza. Udzanai nekupana – VOA60 America.
The Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders (YALI) is the brainchild of U.S. President Barack Obama which he launched with the objective of harnessing and nurturing young African leaders.
America Yovhota mu 2016
Nhau dzesarudzo nekupenengurwa kwesarudzo yemutungamiri weAmerica. Titevereyi uye ipanayi zvamunofunga pamusoro pesarudzo pa facebook.com/voashona.
Yali Zimbabwe Fellowship
Yali African Fellowship, Mandela Washington Fellowship
Gungano Guru Reunited Nations Rechimakumi Manomwe
Mamiriro ezvinhu munyika
China President visit to ZImbabwe
Rwendo rwemutungamiri weChina, VaXi Jinping, kuZimbabwe, huri kutsanangudzwa nevamwe kwete senhoroondo yakakosha chete, asi sechiratidzo chekubudirira kwegwara reZimbabwe mukudyidzana kwayo nenyika dzekumabvazuva. Rwendo rwaVa Xi rwunoitika apo hukama hwe
Chirongwa cheKuvhota Muna 2018
Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, iri mubishi rekunyoresa vanhu kuitira kuti vazovhota musarudzo gore rinouya. Vane kodzero yekuvhota vari kukurudzirwa kunyoresa chirongwa ichi chisati chapera muna Ndira 2018.
Get full coverage of the Coronavirus pandemic including the latest news, analysis, advice, and explainers for Zimbabwe and from around the world at shona.com/covid-19.